मंगलबारको संसद बैठकको सून्य समयमा बोल्ने क्रममा नेकपा नेतृ तथा सांसद यसोदा सुवेदीले स्वस्थानीको पाना च्यातिनुपर्ने भनाई राखेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनीविरुद्ध चर्को आलोचना भएको छ भने कतिपयले उनको भनाईप्रति समर्थन पनि जनाएका छन् । सुवेदीले छाउगोठ भत्काएर मात्र नहुने भन्दै त्यस्ता कुरिती अनि अन्धविश्वास चिर्न जनचेतना आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् । सोहि सन्दर्भमा उनले स्वस्थानी, पञ्चमी कथा लगायतका धार्मीक पुस्तकहरुले अन्धविश्वास फैलाएको भन्दै उक्त पुस्तकहरुका केहि पाना च्यात्न आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् ।
सोहि कुरालाई लिएर उनको विरोध भइरहेको विषयमा संसारन्युजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईले संसद भवनमा बोल्नुभएको कुराको किन यति विवाद गरियो, के भन्न खोज्नुभएको थियो ?
मैले बोलेको विषय त्यति धेरै विवादित हुनुपर्ने विषय जस्तो त लाग्दैन । फेरि पनि धार्मिकरुपमा जोडेर त्यसलाई विवादमा ल्याउने प्रयत्न गरेको महसुश मलाई भएको छ । धर्मको नाममा उत्पीडनको खेती गर्नेहरुले यसलाई विवादमा ल्याउन चाहेका हुन् । मंगलबारको शून्य समयमा ३ वटा कुरा मैले उठाएकी थिए । पहिलो कुरा सरकारले छाउपडि प्रथाजस्तो कुप्रथा हटाउन छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएको थियो । मैले त्यो काम स्वागतयोग्य छ, भनेको थिएँ । दोस्रो कुरा मैले छाउगोठ भत्काएर मात्र छाउपडि प्रथा अन्त्य हुँदैन भन्ने विषय राखेको थिएँ । छाउ एउटा संस्कार हो । यो संस्कार नेपालभर कुनै न कुनै रुपमा प्रचलनमा छ । यस्को अन्त्य गर्न मान्छेहरुमा जनचेतनाको अभियान आवश्यक छ भन्ने कुरा मैले राखेको थिएँ । मान्छेको मन मस्तिस्कमा भएका छाउ र छुवाछुतलाई पनि हटाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । यस्मा कतिपय धार्मिक संस्कारले पनि प्रसय दिएका छन् । धर्म संस्कारले धेरै आशंका पैदा गराईरहेको छ । छाउपडि पनि धर्मकै कारण कायम भैरहेको छ । धार्मिक पुस्तकहरुमा छाउपडि बारे यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ भनिएकोले मान्छे डराएर यो प्रथालाई कायमै राखेका छन् ।
धर्मकै डरले महिलाहरुले गाईले खाने घाँस काट्ने तर गाईको दूध नखाने गर्न बाध्य भए । धर्मका नाममा हाम्रा केहि संस्कार कुसंस्कार भएका छन् । गाउँमा मात्र हैन सहरमा पनि यस्ता कुसंस्कार कायमै छन् । हिजो राजधानीकै घटना हेर्नुहोस् न । अर्जुन कार्कीको श्रीमती महिनावारी भएकोले श्रीमानसँगै मन्दिर जान पाउनु भएन, त्यहि बेला उहाँको हत्या भएछ । कतै न कतै यहि कुसंस्कारको शिकार उहाँ हुनुभएको त होइन भन्ने पनि लाग्छ । यदि उहाँ जान पाउनु भएको भए यस्तो घटना हुन्थेन कि !
महिला उत्पीडन हुने यस्ता संस्कारहरुको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसमा नाम लिने क्रममा मैले स्वस्थानी र ऋषि पञ्चमीको कथाको नाम लिएकी थिएँ । यी दुई कथामा महिलालाई धेरै नै अपमान भएको महशुस मैले सानै उमेरदेखि गर्दै आएको गरेकै हो । यस्ता कथाहरु जसले महिलालाई अपहेलना र तिरस्कार गरेर आउँछन्, यस्ता कुराहरु हटाउँ, यस्ता चिज परिवर्तन गरौं, च्यातौं भन्ने सन्दर्भमा मैले विषयको उठान गरेको हो । शदियौं पहिलेको समाजमा यस्ता कुरा पाच्य थिए होलान् तर अहिलेको समाजमा यो कुरा महिलाको सामाजिक र आर्थिक विकास हुन नदिनु हो । नेपाली जनमानसमा पनि घर–घरमा भनिने र सुनिने यस्ता स्वस्वाथी ब्रतकथाहरुबाटै समाज बढी प्रभावित हुने भएकाले यसभित्र रहेका समाजलाई अपाच्य हुने र २१ औं शताब्दिका महिलालाई तल पार्ने विषयवस्तु हटाइनु पर्छ भन्न खोजिएको हो ।
धर्मको विषयमा तपाईको धारण के हो ?
व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म कुनैपनि धर्म मान्दिन । माक्र्सले धर्म एउटा अफिम हो भन्नुभएको थियो । माक्र्सको कुरामा म सहमत छु । तर समाजमा धर्मप्रति मान्छेका आस्था छन् । त्यसैले मान्छेका व्यक्तिगत आस्थामाथि प्रहार गर्ने मेरो सोच हुँदै होइन । अरुको आस्थाको सम्मान गर्दागर्दै मैले मेरो स्वतन्त्रताको पनि रक्षा गर्नुपर्छ । धर्मकै कारण म कहाँनेर पीडित भए भन्ने कुरा मैले खोज्नुपर्छ अनिे म जस्ता लाखौं करोडौं महिलाको स्वतन्त्रताको रक्षाको कुरा पनि हो । उनीहरुको अस्तित्व रक्षाको कुरा हो । उनीहरुको स्वाभिमानको रक्षाको कुरा हो । उनीहरुको अस्तित्व, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता कहाँबाट मिचिइरहेको छ भन्ने कुरामा सामाजिक उखान टुक्काको कुरा, सामाजिक प्रचलनको कुरा, कथा परम्पराका कुराहरु आउँछन् । यीनै कुरामध्ये हिजो मैले एउटा कुरा बोलेको हुँ ।
तपाईले हिजो बोलेको विषयलाई लिएर कतिपय महिलाअधिकारकर्मीहरुले पनि विरोध जनाउनुभयो नी ?
कस्ले कसरी विरोध जनाउनुभयो सबैको कुरा त मैले हेरेको छैन, सुनेको छैन । हिजोको विषयलाई कसैले ठाडै विरोध गर्नुभएको छ भने त्यो विरोधको लागि विरोध मात्र हो । महिला आन्दोलनसँग त्यो विरोध मिल्दैन । महिला आन्दोलनको मर्म भनेको सामन्ती पितृसत्तावादी उत्पिडनबाट मुक्त गर्ने भन्ने हो । सामन्ती पितृसत्ताबादी उत्पिडनको रुप बिभिन्न प्रकारका छन् । त्यसको जरो किलो नउखेलेसम्म महिला मुक्ति सम्भव छैन । सामान्तबादलाई प्रोत्साहन गर्नेखालका धार्मिक संस्कृति हाम्रोमा व्याप्त छन् । धार्मिक खोलभित्र रहेका सामन्ती र पितृसत्ताबादी सोच चिन्तन प्रवृत्तिहरु छन् । वेदमा भएका कतिपय विषयहरु दैनिक जीवनमा सकारात्मक असर पार्ने खालका पनि छन् त्यसलाई म मान्छु । तर बैदिक काल पछाडि पौराणिक कालहरु जो जोडिदै आए बेदका राम्रा विषयलाई छोप्ने प्रयासहरु भए । महाभारत, रामायण गीतमा एउटा कालखण्डको कथा छन् । तर स्वस्थानी ब्रतकथामा एउटै कथाकाल पनि भेटिदैन । शिव र सतिदेविको कथा पनि छ, विष्णु र पार्वतीको कथा पनि छ त्यसपछि लाभन्य देशको कथा पनि त्यसमा जोडिएर आउँछ । सतिदेवीको कुरा गर्दा साँखु र शालिनदीको कुरा आउँछ । शालीनदी त हदै भए किराँतकालको कुरा हो । त्यो भन्दा अगाडि त त्यस्तो शहरीकरण भएको हामीले भेट्टाउदैनौं ।
स्वस्थानी काल्पनिक हो भन्न खोज्नुभएको ?
त्यसो पनि नभनौं । स्वस्थानी ब्रत कथा हिन्दु धर्ममा सबैभन्दा पछाडि लेखिएको कथा हो । बिभिन्न कथा कुथुंग्री जोडेर बनेको कथा संग्रह हो स्वस्थानी । धेरै पछाडिका कथाहरु त्यसमा जोडिएका छन् ।
पछिल्लो कथा स्वस्थानी हो भने त त्यो सबैभन्दा बढी प्रगतिशिल हुनुपर्ने होइन र ?
हो । हुनुपर्ने प्रगतिशिल हो तर त्यो समयमा सामान्ती पितृसत्ताबादी उत्पीडनको उत्कर्षमा पुगेको बेलामा बनेको कथा भएको हुनाले सबैभन्दा धेरै महिला उत्पिडनको कथा छ । बाल विवाहलाई पनि त्यसले बैधानिकता दिएको छ । बलात्कारलाई पनि प्रश्रय दिएको छ । अनमेल विवाहलाई पनि प्रश्रय दिएको पाइन्छ ।
तपाईलाई क्रिश्चियनहरुले उचालेको भन्ने पनि आरोप लगाईएको छ नी ?
यो त हद दर्जाको आरोप भयो । विषयबस्तुको गहिराईमा नपुग्ने, सत्य र तथ्यको आधारमा आँकलन नगर्ने, अनुमानका भरमा मनपरि बोल्ने । लोकतन्त्रको स्वतन्त्रता दुरुपयोग गरेको अनुभूति भैरहेको छ मलाई । क्रिश्चियन समुदायसँग यस्को कुनै साईनो सम्बन्ध छैन । व्यक्तिगत हिसावले भन्नुपर्दा धार्मिक रुपमा जुनसुकै धर्मलाई म अफिमको रुपमा लिन्छु । तर धर्म निरपेक्षतालाई हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको छ । मैले पनि सबै धर्मावलम्बीहरुलाई सम्मान गर्छु ।
संसदमा तपाईले बोलेकै विषयलाई लिएर तपाईलाई कुनै धम्की या फोन आएको छ ?
फोन नै आएको त छैन । फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा धेरै नै विरोध गरेको देखेको छु । एकजनाले त कुकुर्नी नै भन्नुभएको रहेछ । त्यो पनि स्वस्थानीकै प्रभाव हो भन्ने मेरो बुझाई छ । ‘पतिलाई ढाँटेर खायो भने कुकुर्नी हुन्छे, बचन लाए लाटी हुन्छे’ भन्नेजस्ता प्रसङ्ग छ नी त स्वस्थानीमा ।
सत्य बोल्दा असत्यको तुवाँलोमा रमाएकाहरुले विरोध गर्दा रहेछन् । हिजो पृथ्वी गोलो छ भनेर ग्यालिलियोले व्याख्या गर्दै गर्दा एकथरीले पागल भएको संज्ञा दिएका थिए । सत्य बोल्दा शुकरातले विष पिउन परेको सत्य पनि हाम्रो सामु छ । अहिले मैले पनि हिन्दु धर्मभित्र रहेका बिकृति र बिसंगतिहरु हटाउन माग गर्दा मेरो बिरोध गरिएको छ ।
तपाईले स्वस्थानी सुन्नुभएको छ ?
मैले यो वर्ष स्वस्थानी सुनिन । तर म दाबी गर्छु स्वस्थानीको ब्रत कहिल्यै नबसे पनि सबैभन्दा धेरैपटक स्वस्थानी सुन्ने मान्छे म हुँ । मेरो बुझाईमा स्वस्थानीमा सकारात्मक पक्ष उल्लेखनिय छैनन् । सतीदेविको अंगहरु पतन भएका स्थानहरुलाई तिर्थस्थलको रुपमा वर्णन गरिएकोले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनेका छन् । त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिएला । स्वस्थानी कथामा नै एकजना विदेशीले पीएचडी गर्नुभएको रहेछ । उहाँले एक अन्तवार्ताको क्रममा नेपाली महिलाहरुले यति कठोर ब्रत कसरी गर्न सक्छन् भनेर प्रश्न उठाउनुभएको रहेछ ।
बेलुकामा समय बिताउनको लागि, मनोरञ्जनको लागि कथालाई ठीकै मान्न सकिएला । मान्छेलाई एकाग्र बनाउने र अनुशासित बनाउने विषयलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । मेरो विरोध चाँही के मा हो भने स्वस्थानी विधिको कुरा गर्दा ‘प्रसाद चाँही श्रीमान भए श्रीमान्लाई दिने, श्रीमान नभए छोरालाई खुवाउने, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिने र मित छोरा पनि नभए नदीमा बगाउने’ भनिएको छ । छोरीलाई पनि त खुवाउन सकिन्थ्यो होला नि ! छोरी पनि आफ्नै सन्तति हो । छोरी छैन भने आफै पनि खान सकिन्थ्यो । आफूले मेहनत गरेर बनाएको प्रसाद खोलामा किन बगाउनु पर्यो ? छोरीलाई नदिईकन, आफू नखाईकन खोलामा बगाउने भन्ने कहाँको न्याय हो ?
दोस्रो कुरा त्यहाँ बृन्दाको प्रसंग छ । बृन्दाको श्रीमान् राक्षसी प्रवृत्तिको हुन्छन् । उनीसँग महादेवको लडाई हुन्छ । महादेवले मार्न नसकेपछि बुझ्दै जाँदा उस्को शक्ति बृन्दाको सतित्वमा रहेछ । श्रीमान्लाई हराउन बृन्दाको सतित्व हरण गर्नुपर्ने भन्दा विष्णु भगवानले रुप परिवर्तन गरेर बृन्दाको श्रीमान् जस्तै रुप धारण गरेर बृन्दाको सतित्व हरण गरेको छ । सतित्व हरण गर्नु भनेको त बलात्कार हो नि । यस्ले बलात्कारलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यो त बदल्नु पर्यो नि ।
अर्को प्रसंग ७ वर्षकी बच्चीलाई ७० वर्षको बुढासँग विहे गरेको भनिएको छ । त्यसलाई पनि जायज रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । महिलालाई अपमानित गर्ने गरी प्रसंग त पटक–पटक आउछ । यस्ता प्रसंगहरु बदल्नु पर्छ । यस्ता प्रसंग नबदल्ने हो भने महिला आन्दोलनका कुरा गर्ने, महिला मुक्तिको कुरा गर्ने अनी हाम्रा संस्कार र संस्कृतिमा भएका कुप्रथा, कुप्रचलनलाई स्वीकार गर्ने हो भने हामी कसरी परिवर्तन हुन सक्छौं ? हाम्रा पछिल्ला पुस्तालाई पनि यो जस्तो छ त्यस्तै हस्तान्तरण गर्दै जाँदा यस्ले नेगेटिभ भाईव दिइ नै रहने भयो । मैले यस्लाई परिवर्तन गरौं भनेको हो । यस्लाई पनि विरोध गर्ने हो भने त छाउ गोठ भत्काउनुको पनि अर्थ भएन । महिला मुक्तिको कुरा गर्नुको पनि अर्थ भएन ।
अन्यमा तपाईको विरोध गरिरहेकालाई के भन्नुहुन्छ ?
बुझेर पनि बुझ पचाएर विरोध गर्नेहरुलाई त के नै भन्न सकिन्छ र । तर पनि यो बैचारिक वहश हो । यो वहशले लामै समय लेला । हिजो हाँस्नु हुँदैन नारीहरुले बेश्या हुने हाँस्दछन्, बेश्या ती नहुनन् सम्पूर्ण काम ती नाँस्दछन् भनेर कविता लेख्न रुचाउनेहरु पनि हाम्रो समाजमा छन् । नारीलाई दबाउनै पर्छ, थिचोमिचो गर्नु नै पर्छ भन्नेहरुले मेरो विरोध गर्छन् भने यो एउटा बैचारिक वहसको विषय हो । वहश गर्दै जाउँ भन्ने एउटा कुरा म राख्न चाहन्छु ।
धार्मिक रुपमै तपाईमाथि आक्रोशित हुनेहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
कतिपयलाई धार्मिक रुपले ठूलै आक्रमण भयो, क्रिश्च्यिानीटी हावी भयो भनेर साच्चै भित्रैदेखि पीडाबोध भएको छ भने वहाँहरुले एकपटक फेरि मैले बोलेका कुराहरु सुनिदिनुहुन म आग्रह गर्दछु । मैले कसैको धार्मिक आस्थामा आँच आउने कुरा गरेको छैन । महिला स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी धर्मका नाममा कहि कतै प्रयोग भएका छन्, त्यसलाई बदल्ने कुरा मैले उठाएको छु । कमेन्ट र स्टाटसको आधारमै विरोध भैरहेको पनि मैले पाएको छु । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्यौं, सामन्तवादको पनि अन्त्य गर्नु जरुरी छ । यो पितृसत्ताबादको पनि जरोकिलो उखेल्ने अभियानसँग जोडिएको विषय हो । यस्लाई त्यहि भावनाका साथ वहशमा लैजाउ भन्न चाहन्छु ।
विषयलाई थोरै अतिरञ्जीत पनि बनाईयो । चौतर्फी तपाईमाथि आक्रमण पनि भैरहेको छ । तपाई हतोत्साहि त हुनुभएको छैन ?
हतोस्साही नै त भएको छैन । यो विषयले लामो वहशको माग गर्यो विषयलाई गहिराईमा गएर बुझ्नको लागि थप अध्ययनको पनि माग गर्यो । मैले कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा आरोप लगाउने गरी विषय प्रस्तुत गरेको छैन । धार्मिक स्वतन्त्रता माग गर्नेहरुलाई मैले इंगित गरेको पनि छैन । मेरो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने अधिकार मलाई पनि छ ।
सांसदमा उनले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै :
‘छाउपडी जस्तो कुरिता र कुसंस्कार हटाउन नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएको छ, यो स्वागतयोग्य कुरा हो । सदियौंदेखि नेपाली महिलालाई जकडेर राखेको कुरीति भत्काउन छाउगोठ भत्काउनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, ‘बारीका ढिक भत्काएर छाउगोठ भत्काएर मात्र के गर्नु ? मान्छेको मन मष्तिस्कबाट भत्काउन जरुरी छ । के गाउँ, के शहर, के पूर्व के पश्चिम सबैतिर कुनै न कुनै रुपमा छाउ संस्कार हटाउन सरकार, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज सबैको संयुक्त प्रयास र शसक्त अभियानको खाँचो छ, जसले छाउपडीसँग जोडिएर आउने हाम्रा धार्मिक अन्तविश्वास भत्काउन सकोस् । छाउ जस्ता परम्परा र संस्कारलाई मजबुत पार्ने स्वस्थानी ब्रतकथा र ऋषि पञ्चमी कथाका पन्नाहरु च्यात्न सकोस्, तसर्थ म सम्माननीय सभामुखमार्फत सरकारको यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।